Kedu ihe bụ igwe eletriki kachasị mma n'okpuru 00 | ebike Shuangye
Mbido blog News Kedu ihe bụ ụgbọ ala eletriki kachasị mma n'okpuru $ 1000
Datebọchị ： 2020-08-06 Categories ：News/ blog Nlele ： 3,082
Kedu ihe kacha mma igwe eletrik dị n'okpuru 1000
Igwe eletriki eletrik nwere ike ịbụ ezigbo ezigbo nhọrọ maka ndị chọrọ njem ọsọ ọsọ, nke na-enweghị ntụpọ na ọsụsọ, na-achọ ịnụ ụtọ ịnyagharị na-atọ ụtọ ma na-atọ ọchị ma ọ bụ ịnyagharị nkịtị. Ọ bụghị naanị na ha na-eme enyi na enyi, na-adaba adaba, na-agbanwe agbanwe, nke zuru oke maka njem dị anya, mana, ọtụtụ mgbe karịa, ha nwere ike ịbụ nnukwu ego na ndụ. Igwe ndị a na-adị mfe ịnya ebe ndị mmadụ jupụtara. Can nwere ike ma jiri igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ site na iji moto. Ọ na-enyere gị aka ịchekwa ahụike gị. Zụrụ igwe eletriki kachasị mma n'okpuru 1000 ga-aghọ ihe ntinye ego bara uru. Uzo nke igwe eletrik na-adabere n'ọtụtụ ihe na ọnụahịa igwe eletrik na-adabere na njirimara na ogo nke ihe eji emepụta igwe eletriki igwe eletrik. Ka anyị tụlee igwe eletrik 5 kachasị mma n'okpuru $ 1000 na ụlọ ọrụ igwe eletriki igwe eletrik Shuangye. Enwere m olileanya na ọ ga-enyere gị aka ịhọrọ nke kachasị mma maka gị. Kedu ụgbọ ala igwe eletriki kachasị mma dị n'okpuru $ 1000? Ugba igwe eletriki igwe eletrik bu ihe ndi mmadu choro. Ọ e mere aka ike ike, mkpumkpu teren na uru nke na-agbakwunye moto ike na ọsọ dị ka nke ọma. Ma ugbu a, a na-eji igwe eletrik igwe eletrik eme ihe n'ụzọ ndị ọzọ, ọ bụghị naanị na-eme ihe n'èzí.
1.A6AH26 Ezigbo Igwe Igwe Igwe
Ọ bụrụ na ị na-achọkarị igwe kwụ otu ebe ugwu igwe eletrik dị n'okpuru $ 1000 maka mmega njem na n'èzí. Ọ dị ọnụ ahịa na-akwụ ụgwọ ma na-enye nnukwu uru maka ego gị. Ihe kachasị pụta ìhè bụ ọdịdị igwe kwụ otu ebe a dị ka igwe kwụ ọtọ mgbe ị na-ahụ ya na nke mbụ, na-ekele aka maka usoro igwe kwụ otu ebe ugwu na batrị zoro ezo. Ihe eji eme igwe ihe a nwere batrị lithium 36v 10ah zoro ezo, ihe eji eme ya bupu ya ma mee ya wepu ya na igwe. Otu ụgwọ zuru oke chọrọ naanị awa 5-6 ma gaa 40-60km.250 watt ma ọ bụ 350 watt brushless motor na-enye ike ịrịgo na osooso, ị nwere ike iru ọsọ ọsọ nke ihe dị ka 25km / h. Ọzọkwa, ihe ọzọ dị mma bụ ntụpụ ọsọ ọsọ 21 nke nwere derailleurs, ọ na-enye ohere ọsọ, ezigbo, na ezigbo njem n'okporo ụzọ abụọ ahụ dị larịị, yana ụzọ dị warara. Nkwado breeki nke 160mm nwere ike ịnya ụgbọ n'enweghị nsogbu na ịmara na ọ dị mkpirikpi oge brake, braki ahụ ga-enye braki siri ike na oge mbụ. Ekele na alloy aluminium, e-bike a dị naanị 21kg. Ridzọ abụọ na-agba ịnyịnya, Pedal nyeere ya na E-Bike aka, ebe ọ na-enyebu ụzọ iji rụọ ọrụ dị iche iche ise.
2.A6AB26 Electric Mountain Bike Maka Sale
Ọ bụrụ na ịchọrọ igwe eletriki, ego na ntụsara ahụ, igwe eletriki igwe eletrik A6AB26 maka ire ere bụ nke gị. Igwe kwụ otu ebe a nwere 36V 250W igwe na - enweghị ọfụma nke na - enye ya nnukwu ikike ịrị ugwu, jiri igwe kwụ otu ebe yana ịrịgo ugwu, ma ọ bụ naanị maka njem kwa ụbọchị. Ma kwadebere ya na batrị karama 36v 10ah nke na-enye gị ohere ịnya ịnyịnya igwe kwụ otu ebe ruo 40km na otu ụgwọ zuru oke, ma rute ọsọ ọsọ gburugburu 25km / h. Batrị si mbughari imewe bụ a ezi nche mma, na-akwado batrị gbapụ na isi si electricbike na-ana, n'ihi ya, ị na-adịghị na-echegbu onwe ya nwere ike zuru. ″Gbọ ala a 26 is kwesịrị ekwesị maka ịnya na ala ọ bụla, ma ọ bụrụ ụzọ okporo ụzọ, gravel, n'okporo ámá obodo, okporo ụzọ azụ, ma ọ bụ ụzọ igwe kwụ otu ebe. 160mm n'ibu n'ihu na n'azụ diski brek dị nnọọ irè iji hụ na onye na-agba ịnyịnya n'okpuru ọnọdụ ọ bụla ịnya. A na-ahụkwa ihe ngosi LCD na-arụ ọtụtụ ọrụ na etiti aka. Ọ na-egosi na-agba ọsọ ọsọ, agbara, batrị, ike moto. Igwe eletriki igwe eletrik maka ọrịre na-abịa na 3W Ikanam n'ihu ọkụ maka visibiliti hụ na ndị ọrụ na-agba nchekwa. Kedu ụgbọ ala eletrik kachasị mma nke obodo n'okpuru $ 1000? Maka ndị na-agbara ndị njem ihe, bọket a gbanyere batrị obodo nwere ike ịbụ ezigbo onye na-azọpụta ndụ. Eletriiki eletriki bụ maka okirikiri nkịtị, izu ike gbara gburugburu obodo, ma ọ bụ mee njem gị gburugburu ogige.
3.A5AH26 Igwe igwe eletrik kachasị mma
Nke a bụ otu n'ime ndị ọgba tum tum na-ere ọkụ na-ere ọkụ na igwe kwụ otu ebe na obodo. Designkpụrụ mara mma, jikọtara ya na njikwa-enyi na enyi na njikwa dị elu na-eme nke a ka ọ bụrụ ịgba. Ihe eji emegharị inch iri abụọ na isii dabara adaba maka ndị okenye, ndị njem ma ọ bụ ụmụ akwụkwọ kọleji. Igwe a na-ere eletriki eletrik na-abịa na batrị lithium-ion batrị nke 26v zoro ezo na okirikiri dịka ịnye ọkụ, ọ na-ewepụkwa ụgwọ, naanị chọrọ awa 36-5 iji mezue otu ụgwọ zuru ezu. Igwe ahụ nwere ike nke 6 watt ma ọ bụ 250 watt, na-agba ọsọ ọsọ ọsọ nke 350-25km / awa n'ụzọ dị mfe. Ma ọnọdụ Pedal Enyemaka mode ma ọ bụ E-Bike mode, ọ dị mfe iji igwe moto siri ike gbagote igwe. Igwe batrị a na-agbanye batrị nwere nke ọma wuru ewu na-adịgide adịgide nke na-eme ka ịnyịnya ígwè ahụ dịkwuo ogologo. Usoro breeki na-eji breeki ọkọlọtọ 160mm dị n'ihu na azụ azụ, nwere braking siri ike mgbe ịchọrọ ịkwụsị igwe kwụ otu ebe ozugbo. The ebike na-egosipụta usoro nnyefe ọsọ ọsọ 21, maka igwe eletriki igwe eletriki, ọ karịrị ihe zuru ezu na 100mm njem na-agbanwe mgbatị nkwanye alloy alloy n'ihu ndụdụ na-enye nnukwu nsonaazụ mmụba mgbe ị na-aga n'okporo ụzọ.
4.A5AH24 Obodo Igwe Igwe Maka Ire
Ma ị na-ala ọrụ ma ị na-ebu ibu, obodo ịnyịnya ígwè a na-ere ere ga-ere ya. Igwe igwe eletrik a na-agbaso usoro nhazi nke ala, jikọta oge ochie na mgbazinye oge a ka ọ bụrụ ihe mara mma n'okporo ámá obodo. Wuru gburugburu fechaa aluminum alloy etiti, a igwe eletriki igwe nwere ikike idi bụghị naanị ogologo obodo na-aga kamakwa ụfọdụ siri ike teren. Batrị lithium nke 36v 10ah dị mma iji kpọọ ya ogologo oge n'okpuru ọnọdụ enyemaka, ma were 5-6 awa rụchaa ụgwọ zuru ezu, ịnya 40-60km abụghị nsogbu. Ihe ọ bụla usoro enyemaka pedal ma ọ bụ ọnọdụ e-bike, 250w brushless moto na-enye ike zuru ezu iji igwe kwụ otu ebe jiri ọsọ ọsọ nke 25km / h. A V-brek ọkọlọtọ na n'azụ electric breeki na moto mkpọchi, na a 3W Ikanam n'ihu ìhè iji hụ na-agba ịnyịnya nchekwa na ala visibiliti. Ọ bụrụ na ịchọghị wheel 24, enwere wiilị 26-inch ịhọrọ nke ga-adabara ọtụtụ ndị. Igwe igwe a na-ere ire ere a bụkwa ebe dị mma maka nnyefe nri.
5.A1-7 Mpempe Igwe Batrị Kwadoro
20-bike mpịachi batrị kwadoro igwe kwụ otu ebe na-onwem na niile nri fractures na-eme ka ọ adabara ezigbo obodo n'okporo ámá. Ọ bụrụ na ịchọrọ akụ na ụba, ịdị mma, njem ngwa ngwa, adaba iji buru ma anaghị ewe ohere dị ukwuu, ọ bụ ezigbo nhọrọ ma ọ bụrụ na ị bụ ọhụrụ ịgba ígwè. Igwe na-enweghị ntụpọ 250W ka dị mma iji dozie ọtụtụ nsogbu ma bịa na batrị lithium 36V 10Ah zoro ezo. Batrị ahụ nwere ike iwepụ ga-enye gị nhọrọ ịkwanye ya na igwe kwụ otu ebe. Can nwere ike iru ọsọ ọsọ nke 25km / h, na n'okpuru ọnọdụ dị mma, ọ nwere ike ịga 40-60 na otu ụgwọ. Enwere ụzọ ịnya ịnyịnya atọ ị nwere ike ịhọrọ - ọnọdụ eletrik dị ọcha, ọnọdụ enyemaka pedal na ọnọdụ igwe kwụ otu ebe. Electricdị eletriki dị ọcha bụ nke ị ga-aga ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnụ ụtọ njem dị anya na-enweghị pedal. Enwekwara nhọrọ ịhọrọ ọnọdụ PAS. Ọnọdụ enyemaka pedal nwere ọkwa ise maka ahụmịhe ịgba ịnyịnya ahaziri iche. Ngosiputa otutu LCD na-egosi ike moto, ikike batrị, ọkwa PAS na ndị ọzọ. Ejikọtara ya na ọsọ ọsọ 7 na usoro diski diski 160 na-ahụ na ịgbanwee ike na braking siri ike. Enwere anyịnya igwe eletrik 5 Shuangye (Hotebike) m na-achọ nke dị n'okpuru $ 1000. Na nkenke, ha niile bara uru ịtụle, yabụ ọ bụrụ na ị nwere mmasị na otu n'ime ha, kpọtụrụ anyị ma ọ bụ hapụ ozi gị n'okpuru. More igwe eletriki ndi ozo maka ire ere, gaa na Ụlọ Ọrụ Weebụ.
Tags:Egwuregwu Egwuregwu Kachasị Mma N'okpuru 1000
Mbụ: 4 ihe mere ndị mmadụ ji ahọrọ igwe eletriki ugboala
Next: Kedu ụdị ọsọ igwe na-agba ụgbọ mmiri elegharịghị anya 750w eletrik na-aga